Sida loo qaado sawirada ugu fiican ee suurto galka ah Samsung Galaxy S10 + | Androidsis
13 khiyaanooyin ah si aad sawirro fiican uga qaadatid Galaxy S10 +
Manuel Ramirez | | Samsung, Khiyaamada Android
Taxanahan khiyaanooyinka loogu talagalay inaad sawirro fiican ka qaadatid Galaxy S10 + ayaa kuu oggolaanaya inaad hesho dhammaan casiirka yaa haysta taleefankaaga sidaasna kula yaaba asxaabta iyo shisheeyaha fasaxan aan ku haysanno geeska.
Laga soo bilaabo sida loo qaado sawirro badan oo dabiici ah, isticmaal autofocus si aad ula socoto shay ama hagaaji dhinacyada sawirradaas oo aan ku qaadan karno xagasha ballaadhan, waa qaar ka mid ah «talooyinka» aad ka heli doontid hoosta, sida fiidiyowga loogu sameeyay munaasabadda.
1 Sawirro ku qaad 4: 3
2 Sawirro badan oo dabiici ah oo leh Galaxy S10 +
3 Qaab otomaatig ah: muujiye muuqaal ah
4 Daar talo soo jeedinta sawirada wanaagsan
5 Focusfocus saar shayga ama qofka
7 Ku qaado sawirro ka wanaagsan kanaga Galaxy S10 +
8 Sawirro laydh badan
9 Is-cad, sawirro dabiici ah oo badan
10 U adeegso diirad firfircoon sawir gacmeedka
11 Ku bilow kamaradda qaabkii ugu dambeeyay ee la isticmaalay
12 Dhaqaaji kiciyaha meel kasta
Sawirro ku qaad 4: 3
En tabaha ugu fiican ee Galaxy S10 Waxaan horey kuugu tusnay mid ka mid ah talooyinka ugu fiican ee sawir qaadista taleefankan weyn: sawirro ku qaad 4: 3. Waa sababta oo ah marka lagu sameeyo 16: 9 ama shaashad buuxda, runti waa dalag sawirka ka mid ah lagu qaaday 4: 3Marka haddii aad rabto inaad si buuxda uga faa'iideysato xallinta muraayadaha indhaha, ku toog 4: 3. Iskuday waadna arki doontaa natiijooyinka.
Sawirro badan oo dabiici ah oo leh Galaxy S10 +
Muujiyeha goobta ee sawirrada otomatiga ah waa mid ka mid ah wanaagga ugu weyn ee barnaamijka kamaradda; ha lumin taxanahan khiyaanooyinka ah si loogu qaado fiidiyowyo fiican S10 +. Laakiin, haddii aan rabno qaado sawirro badan oo dabiici ah waxaan kugula talineynaa in la joojiyo Muujiyeha muuqaalka, tani waxay noqon doontaa sida loogu qaato "ceeriin" dhammaan cilladaha wejiga qofka, laakiin ka dhow.
Qaab otomaatig ah: muujiye muuqaal ah
Haddii aadan rabin inaad noloshaada dhib ka dhigto, waxaa ugu wanaagsan inaad jiido muujiyeyaasha muuqaalka si aad u qaabeysid qaybo ka mid ah sawir qaadista mid kasta oo ka mid ah qabashadaada. Haddii aad tahay habeenkii, waxay ku dhejin doontaa habka habeenkii, haddii ay tahay muuqaal magaalo, sidaas oo kale ayay samayn doontaa iyo wixii la mid ah qabashadaas gaarka ah ee gaarka ah kuwaas oo ay u xilsaari doonto qiyamka ugu fiican.
Daar talo soo jeedinta sawirada wanaagsan
Haddii aynaan khabiiro ku ahayn qaadashada sawirrada ugu fiican, Galaxy S10 + wuxuu leeyahay ikhtiyaar uu ku dhaqaajiyo soo jeedinta goobta. Waxa runti ay qabato ayaa la dhigaa baarka tilmaamaya in aan u guurno jir si uu nooga digo jaalle ahaan in aan wajaheyno midka saxda ah. Marka waligeen ma seegi doonno qabashada ugu wanaagsan ee cathedral-ka aan booqannay ama garoonka kubbadda cagta ee aan dooneyno inaan tusno asxaabta.
Waxaan aadeynaa Dejinta Kaamiradda.
Waxaan dhaqaajineynaa ikhtiyaarka labaad: Talooyinka qaab dhismeedka.
Waxaan raacnaa hagaha shaashadda.
Focusfocus saar shayga ama qofka
Ikhtiyaar aad u fiican si aanan luminin diiradda saarista shay ama qof dhaqaaqa marka aan sawir qaadaneyno. Qiyaas cunugaada oo dhex mushaaxaya beerta nasashada oo aad rabto inaad sawirro taxane ah ka qaaddo isaga.
Waxaad ku riixday waqti dheer kan yar oo leh saxaafad daawadeyaasha ah.
Way shaqeysaa habka diirada otomaatiga.
Waxay la socon doontaa ilmahaaga iyada oo aan waligeed lumin diiradda iyo muuqaalka jilicsan ee la doonayo, iyadoo looga tegayo goobta inteeda kale, dhammaan walxaha fog, ee ku dhex jira cilladaha goobta.
Laga soo bilaabo cusbooneysiinta Abriil, qaabka habeenkii ayaa yimid Galaxy S10. Maxaa dhacaya taas laga soo bilaabo bishii May tayada sawirada la qaaday waa la hagaajiyay leh qaabkan si uu ula jaan qaado midka gcam ama Huawei. Xitaa iyada oo lagu jiro qaabkan waxaan u adeegsan karnaa xagasha ballaaran si aan sawirro fiican uga qaadno xaaladahaas iftiinka ah.
Waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho qaabkan markasta oo xaaladaha iftiinka aysan ku habboonayn. Taasi waa, meelaha xiran ama habeenkii, waxaan u adeegsanaa qaabka mugdiga iyo waxaan heli doonaa sawiro leh nal ka fiican iyo fiiqan.
Ku qaado sawirro ka wanaagsan kanaga Galaxy S10 +
Habka diiradda firfircoon ee Galaxy S10 + waa hagaagsan yahay, laakiin haddii aan u isticmaalno muraayadaha telephoto qaabkan, sawirradu waxay u soo bixi doonaan si aan hore loo arag taleefankeena. Dabcan, waa inaad taleefankaaga ku cusboonaysiisaa cusbooneysiinta bisha Maajo ama ka sareysa si aad u awood u yeelatid inay firfircoon tahay, maadaama ay ahayd mid ka mid ah ku darista cusub.
Sawirro laydh badan
Haddii aan dooneyno inaan wax yar ka sii qodno qaabka pro ee Galaxy S10 +, waxaan kala dooran karnaa labada furitaan. Waxaan leenahay hal dhinac f / 1.5 iyo f / 2.4. Aperture waa si iftiin badan uga galo muraayadda. Waxaan u adeegsan doonnaa f / 1.5 haddii aan dooneyno inaan sawir ka qaadno si ay ula muuqato laydh badan sidaa awgeedna iftiin badani ka galo muraayadda.
Waxaad ikhtiyaar u leedahay badhanka labaad ee ikhtiyaarrada qaabka taleefanka. Dabcan, haddii aad rabto wax cad, isticmaal f / 2.4 aperture.
Is-cad, sawirro dabiici ah oo badan
Si aad u hesho selfies badan oo dabiici ah waa inaan barkinta ka dhignaa qaabka quruxda kamaradda hore:
Qaybta kore waxaan gujineynaa wadka sixirka ee ku yaal dhinaca midig.
Guji astaanta wejiga ee hoose.
Waxaan hoos ugu dhigeynaa sariirta eber.
Sidan ayay u wada eegi doonaan cilladaha iyo sawirku wuxuu noqon doonaa mid dabiici ah, Maaddaama qaabka quruxda uu mas'uul ka yahay sameynta wejigeenna iyadoo laga dhigayo "caag" badan.
U adeegso diirad firfircoon sawir gacmeedka
Marka laga reebo qaabka sawirka iyo muuqaalka muuqaalka sawir gacmeedka, waxaan leenahay 'Dynamic Focus'. Waxaan ku riixnaa iyo waxaan leenahay afar qaab oo kala duwan cillad duurka Mid ka mid ah taas oo asalka uu mugdi ku jiro, saameyn wareeg ah ayaa la sameynayaa, mid kale oo xawaare ah iyo kan ugu dambeeya ee midabka ugu badan loo xushay inuu sameeyo saameyn midab leh oo xiiso leh.
Ku bilow kamaradda qaabkii ugu dambeeyay ee la isticmaalay
Tani waa mid ka mid ah khiyaamada u oggolaanaysa waayo-aragnimo fiican barnaamijka kamaradda Galaxy S10. Haddii aan isticmaalnay qaabka 'Instagram', waan xirnaa barnaamijka oo markale ayaan bilownaa, waan arki doonnaa taas wuxuu ku noqdaa qaabkii caadiga ahaa ee markii hore ahaan jiray. Haddii taa bedelkeeda aan dooneyno taas ka dib markaan xirno si aan ugu laabanno qaabka Instagram, oo naga badbaadiya dhowr tallaabo, sidan samee:
Waxaan aadeynaa Goobaha Kaamirada.
Y waxaan dhaqaajineynaa «Sii wad isticmaalka qaabkii ugu dambeeyay».
Dhaqaaji kiciyaha meel kasta
Si aan u dhammeyno waxaan kicinta u wareejin doonnaa boos taas noo oggolow inaan gacanta ku qaban karno hal gacan Oo sidaas, suulka, waxaan ku qaadi karnaa sawir si aanaan u sii dheerayn oo aan u dhaqaajinno kaameradda xilligan la qabanayo sawirka:
Waxaan ilaalinaa a riix badhanka badhanka-sii deynta oo waxaan uga wareejineynaa goobta aan rabno.
13 khiyaanooyin ah si aad sawirro fiican uga qaadatid Galaxy S10 + taasi waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku raaxeysatid sawir ka fiican kan taleefankan horay loo siinayo. Ha moogaan sida wireless-ka loogu dalaco Galaxy ama sida Samee Jadwalkaaga Bixby ee ugu horreeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » 13 khiyaanooyin ah si aad sawirro fiican uga qaadatid Galaxy S10 +
Harry Potter: Wizards Unite wuxuu abuuray $ 300.000 maalintii ugu horeysay
LG waxay diyaarinaysaa taleefankeedii ugu horreeyay ee casriga ah oo leh shaashad daloollan